रबिको रास्कोट अस्पताललाइ समाजसेवी इशाले उठाइदिइन लाखौ सहयोग। हेर्नुस कति उठ्यो ( भिडियो )
राष्कोट अस्पतालको लागि एक एक पैसा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मनका धनी सोचका धनी र भाबनाका धनीहरू प्रति समाजसेवी इशा गुरुङले हार्दिक धन्यबाद दिदै अभियानका लागि उठेको रकम को जानकारी दिनु भएको हो। प्रबासमा बसेर पनि नेपाल र नेपालीहरुको सेवामा निरन्तर लागिरहेकी समाजसेवी हुन् इशा गुरुङ। रास्कोटको जनताहरुले स्वास्थ्य उपचार सजिलै पाओस भनेर पुण्य उदेश्य बोकेर अस्पतालको लागि रकम संकलन गरेकी हुन्।
बेलायतको लण्डनलाइ आफ्नो कर्म क्षेत्र बनाएपनि नेपाल मा भैरहेको हरेक पलको खबर राख्ने समाजसेवी इशा गुरुंगले आफुले गर्न सक्ने सहयोग निरन्तर गरिरहेकी छिन्। गरिब दुखि लाइ आर्थिक सहयोग दिने देखि कुनै अभियान संचालन गरेर सहयोग जुटाउने र आबस्यक ठाउमा हस्तान्तरण गर्दै नेपाली समाजको भलाइमा बिगत लामो समय देखि सक्रिय रहेकी छिन। उहाले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट १ लाख रूपिया सहित जम्मा १४० जना सहयोगी मनहरूको तर्फबाट जम्मा १९ लाख ५० हजार ४१० रूपिया रकम सहयोग संकलान भएको जानकारी दिनुभएको हो।
सहयोगको खाचो परेका धेरैलाई सहयोग गरिसकेकी इशा जी ले यस अघि पनि ठुलो सहयोगको घोषणा गरेकी छिन। एक अभियान नै संचालन गरेर उहाले रास्कोट अस्पताल निर्माणका लागि ठुलो रकम संकलन गर्नुभएको हो। कर्णालीको बिकट गाउमा अस्पतालको मुख सम्म पनि देख्न नपाइ मर्ने गरेको घटना सिधा कुरा जनताले देखाएको थियो। उक्त ठाउमा रबि लामिछानेले अस्पताल निर्माण गर्ने अभियान थालेपछि त्यसै अभियानलाई सहयोग गर्दै इशा गुरुंगले सहयोग अभियान सुरु गरेकी हुन्। यस अभियानमा संकलन भएको रकम को बारेमा उहाले फेसबुक मार्फत सार्बजनिक गर्नु भएको छ। उहा मार्फत रास्कोट अस्पताल निर्माण गर्न सहयोग गर्न चाहनेबाट सहयोग संकलन गरिएको हो। आज जनवरी १० मा यो अभियान बन्द भएको हो। ६ हप्ताको समयमा रबि लामिछानेको रास्कोट अस्पताल का लागि १९ लाख ५० हजार बढी रकम उठाउन इशा गुरुङ सफल बनेको हो।
सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सबै उदार मनका धनीहरूलाइ धन्यबाद दिदै आफ्नो अभियान जनवरी १० मा बन्द गर्ने घोषणा समेत गर्नु भएको छ। संकलित सहयोग रकमको एक एक पैसा रास्कोट अस्पताल निर्माणमा प्रयोग गरिने फेसबुक मार्फत जानकारी दिनु भएको छ। नेपाली समाजकै लागि यतिका लागि पर्नुभएको इसा गुरुङ जी लाइ हाम्रो पनि सलाम
भारतीय शोमा तहल्का पिट्दै नेपाली डान्सर सुशान्त खत्री ( भिडियो सहित )
मेलिना राइको गीत ' मेरो सपनाको राजा ' मा अलिशा राइको साथ्
६ दिन लगातार नाचेर बन्दनाले राखिन देशको नाम ! बनाइन विश्व रेकर्ड, गरियो यस्तो सम्मान ( भिडियो )
Previous Article आफ्नो नक्कली आइडी बनाइ रविको चरित्र हत्या गरेको भन्दै जंगीइन समाजसेवी इशा ( भिडियो सहित )
Next Article विश्व विजेता बडीबिल्डर महेश्वरलाई सात लाख दिने सरकारलाई ………..
One Comment on “रबिको रास्कोट अस्पताललाइ समाजसेवी इशाले उठाइदिइन लाखौ सहयोग। हेर्नुस कति उठ्यो ( भिडियो )”
Subha kormocha says:
ईशा दिदी हजुर लगायत सम्पुर्ण सहयोगि दाता हरुलाइ धेरै धन्यवाद ! Good blessing all of you.